Frequently asked questions on how you can help - isiXhosa | Covid-19 Response
Frequently asked questions on how you can help - isiXhosa
Ukukhathalela abany' abantu
Ububele yindlela enamandla kakhulu yokubonisa ukuba simanyene ekunqandeni ukunwena kweCovid-19. Zininzi iindlela onokuthi ubonise ngazo ububele kwabo ubathandayo nakubamelwane ngeli xesha lokumiswa ngxi kweentshukumo:
1. Fowunela abantu abadala okanye abo basesichengeni ukuqinisekisa ukuba banayo yonke into abayidingayo.
2. Thetha ngefowuni nabahlobo kunye nabo ubathandayo ukuva nje impilo nokuba ingaba abadingi nkxaso kusini na.
3. Ukuba uyokuthenga izinto ezibalulekileyo, zinikele ngokubathengela izinto ezibalulekileyo abazidingayo, ezifana nokutya namayeza, kwabo bahlala kule ndlela uyihambayo. Qinisekisa ukuba izinto zabo uzishiya emnyango, kwaye uziqhelanise nokuhamba kude kwabanye abantu ukunqande ukunwena kweCovid-19.
Sisebenzisana neSouth African Red Cross Society ukuhambisa ezi zinto zibalulekileyo kwabo bazidingayo ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto.
Ngelixa uzithengela izinto ezibalulekileyo, yongeza ezinye izinto ezibalulekileyo ukwenzela bao bazidingayo uze uzibeke kwiTroli yokuBinza yaseSouth African Red Cross Society ekwivenkile yegrosari ekwingingqi yakho.
ISouth African Red Cross Society iza kuziqokelela zonke izinto ekunikelwe ize iqinisekise zisiwa kwinetwekhi yeeNGO ezinceda abo basweleyo ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto.
Ndiyingcali yezempilo kwaye ndifuna ukuvolontiya.
ISebe lezeMpilo leNtshona Koloni lenza ikhwelo kwiingcali zempilo ezihlala kweli phondo nezo zihlala ngaphaya kwemida yeli phondo, ukuba zivolontiye zincedise ekulweni ukunwena kwe-COVID-19, eNtshona Koloni.
Lo bhubhani we-Covid-19 ekunye nomthwalo wesifo osele ukho ubeka amaziko ethu phantsi koxinzelelo olukhulu. Ngokuhambelana nenkqubo yokugaya amavolontiya kweli lizwe liphela, sifuna wonke umntu ancedise ukuqinisekisa ukuba sikulungele ukuqubisana nokwanda kwenani labantu abafunyaniswa benale ntsholongwane iCovid-19, abadinga unyango.
Amavolontiya angoogqirha, abongikazi kunye nabasebenzi beenkonzo zoncedo olungxamisekileyo ABANGENGABO abasebenzi beli Sebe banokuncedisa ekunciphiseni uxinzelelo olongeziweyo olunziwa yiCovid-19 kwiinkonzo zethu, kwezi veki nakwezi nyanga zizayo.
Sihlab' ikhwelo kuzo zonke iingcali zezempilo ezikhoyo ukuba zithathe eli thuba ukwenza igalelo elibonakalayo kwaye zisincedise ekuqubisaneni nalo bhubhane.
Abo banomdla wokongeza inkxaso yabo banokubhalisa kwiwebhusayithi yokuGaya amaVolontiya eCovid-19: www.westerncape.gov.za/department-of-health/volunteer-recruitment-questionaire